अमेरिका र चीनबीच बल्ल भयो यस्तो सम्झौता, अब के होला ? — Imandarmedia.com
अमेरिका र चीनबीच बल्ल भयो यस्तो सम्झौता, अब के होला ?
काठमाडौं । इरानसँग तनाव बढिरहेका बेला अमेरिकाले चीनसँग नयाँ सम्झौता गरेको छ । २ देशबीच व्यापार युद्ध कम गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । वाशिंगटनमा प्रतिष्ठित व्यापारीहरुको सहभागीतामा दुवै देशका अधिकारीहरुबीच व्यापार युद्ध कम गर्ने सम्झौता भएको हो । अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि चलेको व्यापार युद्धले विश्वभरको अर्थव्यवस्थामै नकारात्मक असर परेको थियो ।